Banijya News | अधिक तरलता सिर्जना भएपछि बैंकहरुले फेरि घटाए ब्याजदर, कुन बैंकको कति ? - Banijya News अधिक तरलता सिर्जना भएपछि बैंकहरुले फेरि घटाए ब्याजदर, कुन बैंकको कति ? - Banijya News
अधिक तरलता सिर्जना भएपछि बैंकहरुले फेरि घटाए ब्याजदर, कुन बैंकको कति ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले माघ १ गतेदेखि लागू हुने गरी कर्जा र निक्षेपको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । बजारमा अधिक तरलता सिर्जना भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका हुन् । तरलता अभाव हुँदा साधारण निक्षेपकै ५÷६ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने बैंकहरुले अहिले निक्षेपको ब्याजदर १.५ प्रतिशत कायम गरेका छन् ।
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर तीव्र रूपमा घटाए पनि त्यसको जानकारी सम्बन्धित निक्षेपकर्तालाई दिएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चौथो महिनाको मुद्रास्फीति ४.०५ प्रतिशत रहेको छ । तर धेरै बैंकहरुले साधारण निक्षेपकर्ताहरूलाई १.५ मात्र ब्याजदर दिने गरेका छैनन् । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर ४ प्रतिशतमा झारेका छन् । लामो अवधिको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भने बढीमा ८ प्रतिशतसम्म छ । यस्तो ब्याजदर ३ वर्षभन्दा बढी अवधिको मुद्दती निक्षेपमा मात्र दिने गरेका छन् ।
कुन बैंकको निक्षेप र कर्जाको नयाँ ब्याजदर कति ?